Human Resource Recruitment Process • Toe Tet
တစ်ချို့လုပ်ငန်းတွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေမြဲနေတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းဟာ ဆက်တိုက်တိုးတက်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဟာ အမြဲ Productive ဖြစ်နေကြပေမယ့် တစ်ချို့လုပ်ငန်းတွေဟာ ဝန်ထမ်းမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေအမြဲပြောင်းလဲနေပြီး Productive ဖြစ်ဖို့နေနေသာသာ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်းနဲ့ပဲ အမြဲလုံးပမ်းနေရတယ်
ဒီအတွက် အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ HR ဘာသာရပ်မှာပါဝင်တဲ့ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ဆိုတဲ့ Employee Recruitment Process ကို သေချာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Right Man, Right Job, Right Time, Right Cost ဆိုတဲ့ အချက် (၄) ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိဖို့ ဖြစ်တာအတွက်ကြောင့် အလုပ်နဲ့ ဝန်ထမ်း၊ ဝန်ထမ်းနဲ့ အလုပ် ကိုက်ညီမှု ရှိမှသာ Productive ဖြစ်ပြီး စိတ်ကျေနပ်စရာ ကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလည်း အောင်မြင်တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် သက်ရောက်မှုအားကြီတဲ့ Right Man, Right Job, Right Time, Right Cost မူ (၄) ချက်နဲ့ ကိုက်ညီဖို့ သင့်လုပ်ငန်းမှာ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူ ခန့်အပ်ပေးဖို့ HR Department ရှိနေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ Every Owner, Every Management must know employee recruitment process ဆိုတဲ့အတိုင်း လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည် Employee Recruitment Process ဆိုတဲ့ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှု လုပ်ငန်းခွင်ကို မဖြစ်မနေ သိရှိထားရပါမည်။
ဒါမှသာလျှင် အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရာမှာ Recruitment Process သိထားမှ ပြုလုပ်သင့်သည့်အရာများနှင့် ရှောင်ကျဉ်သင့်သည့် အရာများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကာ
– ဝန်ထမ်းမြဲတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု
– ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ Brand တစ်ခု
– ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ စီးပွားရေးတစ်ခု?
– ပျော်ရွှင်တိုးတက်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး Right Man, Right Job, Right Time, Right Cost ဆိုတဲ့ မူအတိုင်း သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန် ယူထားသူတိုင်း အဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် သင်ခန်းစာကို Dr. Sandi ;;;;;;;; ပို့ချထားသော Employee Recruitment Process HR course ကို တိုးတက် Online Learning Platform (www.toetet.com) တွင် လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
1. Recruitment Process Introduction
4. Personal Specifications
10. Weaknesses of Without Proper Recruitment Process